VIP Guard Game Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
VIP Guard Game Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android
Febroary 24, 2022 Janoary 13, 2022 by Reyan Ahmad
Salama daholo, niverina niaraka tamin'ny rindranasa Android mahagaga ho anao rehetra izahay, izay fantatra amin'ny anarana hoe VIP Guard Game. Izy io dia rindrambaiko filokana Android, izay manolotra anao hilalao ho mpiambina ary ny hiarovana ny olona VIP no tanjona.
Araka ny fantatrao ny lalao Android dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra handaniana fotoana. Misy fampiharana an-taonina, miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka mandany ora maro. Matetika, ny lalao dia manolotra fisehoana avo sy rakitra manainga, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo traikefa mahatalanjona amin'ny filalaovana. Noho izany, afaka mahita lalao sy rindrambaiko helo an-taonina ianao, saingy mila fitaovana Android avo lenta hilalaovana azy ireo.
Noho izany dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana lalao tsotra, izay anananao ny fahafinaretana tsara indrindra. Lalao tsotra io, izay iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra. Hizara antsipiriany bebe kokoa momba ity app ity izahay. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao dia mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary zahao izany.
Topimaso momba ny lalao VIP Guard
Izy io dia fampiharana Android Gaming, izay novolavolain'i Gismart. Lalao Arcade io, izay ahafahanao mitana andraikitra amin'ny maha mpiambina olona manan-danja azy. Tsy maintsy arovanao ny olon-kafa, amin'ny fampiasana fananana samihafa amin'ny lalao.
Manolotra ambaratonga samihafa amin'ny lalao izy io. Ny ambaratonga tsirairay dia misy dingana telo, ny dingana voalohany dia mazàna mora tanterahina noho ny hafa. Amin'ny dingana voalohany dia manana mitsambikina ianao ary manakana ny làlan'ny bala na mila manipy olona hafa.
Misy fomba maro, hamita ny dingana rehetra, fa ny tena tanjona dia ny famonjena ilay olona. Noho izany, andao ho fantarina ny dingana faharoa. Amin'ity dingana ity dia mila mampiasa kitapo ianao mba hamonjy ny irakao. Tsy maintsy atsipinao mankany amin'ny toeram-pivorian'ny bala izany, amin'ny fahavalo, na amin'ilay olona.
Ny hany fomba hamitana ity dingana ity dia ny fiarovana ny toetra VIP ao amin'ny Lalao 3D. Amin'ny dingana telo dia tsy maintsy mamita asa maro ianao, voalohany, mila mamono ny bala ianao, ary avy eo dia mila mamono ny mpitifitra ianao. Misy ambaratonga mahagaga, izay tsy maintsy mandresy amin'ny fampiasana ny sainao.
VIP Guard Apk koa dia manolotra hoditra, izay novainao noho ny famohana vola. Hahazo vola arakaraka ny fahombiazan'ny sehatra ianao. Azonao atao ny mampiasa an'io vola io mba hanokafana sy hividianana hoditra ho an'ny mpiambina anao. Manome doka an-taonina koa izy, izay iray amin'ireo zavatra mahasosotra indrindra ao.
Hipoitra ny doka aorian'ny famaranana sehatra, na ny fijerena, saingy misy fiasa samihafa amin'ny Doka toy ny famohana hoditra manokana, fiainana fanampiny, sns. Fa raha tsy te-hahita doka ianao dia afaka milalao an-tserasera ity lalao ity ihany koa. Io no fomba tsara indrindra hilalaovana ity lalao ity raha tsy misy doka.
Misy ihany koa ny vaovao momba ny VIP Guard Mod Apk, saingy manandrana ny kinova maodin'ity lalao ity izahay. Manolotra ny kinova mod, Ads-blocker, vola tsy voafetra, hoditra tsy voahidy, sy maro hafa. Saingy hizara ny kinova mod izahay aorian'ny fitsapana azy amin'ny fitaovana maro.
anarana Mpiambina VIP
Size 80.05 MB
Anaran'ny fonosana com.hanna.bodyguard.expert
Misy endri-javatra an-taonina amin'ity fampiharana ity, izay mahatonga anao hilalao ity lalao ity tsy an-kijanona. Ny sasany amin'ireo fiasa dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, fa misy maro hafa. Izahay koa dia hizara ny sasany amin'ireo fiasa lehibe aminao rehetra ao amin'ny lisitra etsy ambany.
Gameplay amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet
Doka misy tombony
Manana rindrambaiko filokana mitovy amin'izany izahay.
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io ary mizara rohy fisintomana aminao ihany koa izahay. Raha te-hisintona an'ity fampiharana ity dia ity pejy ity, tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana. Hita eo amin'ny farany ambony sy ambany amin'ity pejy ity izy io. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
VIP Guard Game no fampiharana lalao tsara indrindra handaniana ora maro hiarovana olon-kafa, amin'ny fomba mahatalanjona. Noho izany, sintomy ity fampiharana ity ary ankafizo ny fandaniana fotoana kalitao.
Sokajy Games, Arcade Tags Lalao 3D, VIP Guard Apk, Lalao VIP Guard, Lalao VIP Guard Mod Apk Post Fikarohana
Fampidinana fampiharana E Gopala ho an'ny Android [Fanavaozana 2022]
PUBG Mod Tool Apk Download ho an'ny Android [2022 Hack]